सरकारको मात्र भर नपरौ हामि पनि सजग रहौ ! | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
सरकारको मात्र भर नपरौ हामि पनि सजग रहौ !
Published On : २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:०९
नबिन क्षेत्री गोरखा-२ कोखे ताप्ले
बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस अर्थात (Covid-19) ले यति बेला बिश्वबजार आक्रान्त बनिरहेको छ ! चिनको उहान शहर बाट उत्पत्ति भयको यो भाइरसले आज बिश्वका ठुला ठुला मै हु भन्ने देशहरुको अर्थ तन्त्र लाई पनि नराम्रो सङ्ग प्रभाव पारि रहेको छ! कयौ रास्ट्रहरु लाई अब, जग देखि माथि उठ्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ !
कोरोना भाइरस (Covid-19) कै कारण आज सम्म विश्वभरी २,७६,०५,५६० जना कोरोना संक्रमण भैसकेको जानकारि तपाइ हामि लाइ अबगत नै छ ! त्यस्तै बिश्वभरि कोरोना भाइरस बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि उत्तिक्कै बढेर आज सम्म ८,९८,२६९ जना पुगि सकेको छ! यसरि नै तिब्र गतिमा बढिरहने हो भने कहा कति पुग्ला, तपाई हामिले अनुमान गरेर साध्य पनि नहुन सक्छ! आज कयौ रास्ट्रहरु कोरोना भाइरस (Covid-19) सङ्ग जुधिरहेको छ !
यसरि यो प्राण घातक भाइरस सङ्ग जुद्दा जुद्दै पनि अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशमा पनि त्यहाँका नागरिक झन्डै १,९०,६६३ जनाको मृत्यु भैसकेको छ! आज सम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्यात्मक तुलना गर्ने हो भने पनि अमेरिका पहिलो नम्बरमा नै रहेको छ ! त्यस्तै ब्राजिलमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १,२८,५३९ पुगेको छ! साथ साथै हाम्रै छिमेकि रास्ट्र भारतमा पनि उल्लेखनीय रुपमा मृतकको सङ्ख्या बढेर आज सम्म ७३,८९० जना पुगि सकेको छ !
मेक्सिकोमा ६९,०९५ जना मृत्यु भैसकेको छ र इटालिमा पनि ३५,५७७ जनाले आफ्नो ज्यान गुमाइ सकेको कुरा बिश्वजगत सबै लाइ जानकार रहेकै छ ! यो बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (covid-19) ले संसार सारा लाई उथलपुथल पारिरहेको बेलामा हाम्रो देश नेपाल पनि यो भाइरस बाट अछुतो रहन भने सकेन ! २०७६ साल चैत ११ गते बाट नेपालमा पनि अन्य बिदेशि मुलुक तिर झै ,आफ्नो देश र नागरिकको स्वास्थ्य अबस्था लाई मध्य नजर गर्दै, देश पुरै लकडाउनको अबस्थामा रहन पुग्यो ! लकडाउनले पुरै जनजिबन अस्त ब्यस्त भयो ,कल कारखाना ,उद्योग धन्दा, स्कुल/कलेजको पठनपाठन सबै ठप्प भए !
ठुला ठुला डिपार्टमेन्ट देखि हर चिजको ब्यापार ब्यबसाय सबै बन्दा बन्दि भयो ! हवाइ उढान देखि सडकमा गुड्ने सबै खाले सार्बजनिक बसहरु नचलाउने र जो जहा छौ त्यहि बस्ने गरि सरकारले लगडाउन गर्यो ! सरकारको लकडाउन लाइ सबै जनताले सहर्ष स्वीकार गर्दै घर भित्रै बस्न राजी भए तर त्यो लकडाउन कहिले सम्म हो अन्योल नै रह्यो ! २ महिना ३ महिना गर्दै आज लकडाउन देखि सडडाउन सम्म आइ पुग्दा ६ महिना सम्म देशको अबस्था यस्तै रहिरह्यो ! नत कोरोना भाइरस एक बाट अर्कोमा सर्न छोडेको छ नत लकडाउन सकिने अबस्थामा छ !
सरकारले कैले जोर बिजोर प्रणाली बाट सार्बजनिक बसहरु खुलाउन पहल गर्छन, कैले दशै सम्म लकडाउन गर्ने भन्दै दोधारे अबस्थामा नै रोमल्लि रहेको छ ! नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको लागि नलडेको भने हैन ,अझै लढ्दैछ तर सरकारको यो सुस्त प्रयासले कोरोना भाइरस लाइ परास्त गर्न कठिन देखिन्छ ! कोरोना भाइरस (covid-19) कै कारण आज पनि नेपाल लकडाउनमा फसिरहेको छ ! यहि लकडाउनकै कारण लाखौ जनताको रोजगार गुमेर रोजि रोटि खोसियको छ ,कयौ जनता बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर जिबन मरणको दोसाँधमा अड्किरहेका छन !
लाखौ मजदुरहरुको बिचल्लि भयको छ ,बिहान बेलुका २ छाक खानकै निम्ति काम गर्ने ज्यालादारी मजदुरहरु, आज १ छाक पनि खान नपायर पेटमा नाम्लो बेरेर धुरु धुरु रोइरहेका छन ! धन्न यो देशमा मनकारि सहयोगि भाबना भयका सामाजिक अभियान्ताहरु छन र, ति भोका नाङ्गा बालबालिका देखि बृद्ध अबस्थाका बा-आमाले खुल्ला मंचमा बसेर ति नै अभियान्ताले खुवायको खाना खान पायका छन ! ति मजदुरहरुको आसुले यो देश हाक्ने रास्ट्रप्रमुखहरु जो कोहि लाइ गिज्याइ रहेको छ ! आफ्नो जिबिको पार्जनको निम्ति ठेलामा तरकारि बेचेर हिड्ने आमा दिदिबहिनीहरु बेरोजगार बन्न पुगेका छन ,उनै आमा दिदिबहिनी बस्ने घरभाडा तिर्न नसकेर घरबेटीले निकालेका उदाहरणहरु धेरै देख्न सकिन्छ ! तर यहा सरकार भने जैले भ्रष्टाचारमा लिप्त छन ,कानमा तेल हालेर नसुनेझै गर्दैछन !
जनता खान नपायर रुवाबासि गर्दै चिच्याउदा पनि नसुन्ने निकम्मा सरकार भए पछि कस्को के लाग्दो रहेछ र! जनता यता खान नपायर रोइरहेको बेलामा सरकार भने उता बिषालु सर्प पाल्न भन्दै ७२ करोड रुपैया निकासा गर्दैछ ! अनि यस्तो जनताको हित बिपरित काम गर्ने सरकार लाइ वा वा सरकार राम्रो गरेउ भनेर कसरि भन्न सकिन्छ ? आज सम्म नेपालमा कोरोना भाइरस बाट संक्रमण हुनेको सङ्ख्या ४९,२१९ जना रहेको छ !
त्यस्तै गरि कोरोना भाइरस बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि दिनानु दिन बढ्दै गयर आज सम्म ३१२ जनाले आफ्नो अमुल्य जिबन गुमाइ सकेका छन ! कोरोना भाइरस लागेर पुर्ण रुपमा निको हुनेको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय नै छन ,आज सम्म निको हुनेको सङ्ख्या ३३,८८२ जना रहेको छ ! यसै सेरोफेरोमा फेरि आज बाट सडडाउन फुक्का गरि जोर बिजोर प्रणाली तिर सरकार लम्किरहेको छ ! के खोल्न दिने के खोल्न नदिने भनेर तालिका बनायर सार्बजनिक गरिरहेका छन !
जनताको जिबन स्तर भने दिनानु दिन खुम्चिदै गैरहेको छ ! सरकार सङ्ग लकडाउन संबंधित कुनै नया रणनीति भने केहि देखिदैन ,देखिन्छ त जैले लकडाउन गर्ने जनता लाइ घर भित्रै राख्ने ,यति महिना सम्म लकडाउन गर्ने उति महिना सम्म गर्ने भन्ने कुरामा मात्र अड्केको देखिन्छ ! कोरोना सङ्ग दिन रात नभनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिनु हुने स्वास्थ्य कर्मि , जनताको लागि दिन रात भोक प्यास नभनि खटिनु हुने रास्ट्रसेबक आर्मि,पुलिस,शसस्त्र प्रहरि लगायत अन्य कर्मचारीले देखाउनु भयको र उहाहरुले खटिनु भयको समयको जति बयान गरे पनि सकिदैन !
उहाहरु प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहान्छु , सरकारले उनिहरुको तलब भत्तामा केहि रोकावट नगरियोस ! अझै उनिहरुको मनोबल र हौसला बढाउनको निमित्त थप भत्ताको पनि ब्यबस्था गरियोस! साच्चै अब भने पक्कै हामि जनताले सोच्ने बेला आइसक्यो ,रोगले भन्दा भोकले जनता मर्ने बेला भैसक्यो ! त्यसैले सरकारको मुख मात्र नताकौ तपाइँ हामि जनता नै सचेत र सजग बन्नको निम्ति निम्न कुरामा ध्यान दिऔ !
१) घर बाहिर निस्कदा सधै भरि माक्सको प्रयोग गरौ!
२) एक भन्दा अर्को ब्यक्ति सङ्ग कुराकानि गर्दा कम्तिमा पनि १ मिटरको सामाजिक दुरि कायम गरेर छलफल गर्ने गरौ !
३) सके सम्म भिडभाड भयको ठाउमा नजाऔ यदि जानै परे आफु कसरि सुरक्षित भैन्छ भन्ने तबरले जाउ !
४) भिडभाड अथवा बाहिर बाट घर आइ सकेपछि साबुन पानीले मिचि मिचि राम्रो सङ्ग हात धोऔ !
५) सकिन्छ पकेटमा बोक्न मिल्ने स्यानिटाइजर बोकौ यदि सकिदैन भने जहा जे कामले जान लागेको हो त्यहि पुगे पछि त्यहि रहेको स्यानिटाइजर वा साबुन पानीले फेरि हात धुने बानि बसालौ !
६) सरकारले जोर बिजोर प्रणाली बाट सार्बजनिक बसहरु चल्न दिने निर्णय गरे सङ्गै यातायातका साधहरु अलि धेरै भिडभाड पक्कै हुनेछ! बसमा यात्रुलाई चढाउदा होस या झार्दा भिडभाड नगरि सामाजिक दुरि कायम गरेर उक्लने र झर्ने गरौ !
७) सार्बजनिक यातायात सरोकार वालाको हितमा पनि ऐलेको परिवेशमा दोब्बर भाडा लियकै छन ! त्यसैले १ सिटमा १ जना नै बस्ने गरौ ! सदाझै ठेलमेल गरेर सङ्गै बस्ने बानि हटाऔ !
८) बिहान उठने बित्तिक्कै मन तातो १ गिलास पानीमा कागतिको रस राखेर खाऔ!
९) बेलुका खाना खाइसके पछि प्रधानमन्त्री ज्युले भने झै बेसार पानी उमालेर खाने गरौ ! ताकि रोग लाग्न बाट आफु पनि बाचौ अरु लाई पनि बचाउ!
१०) अनावश्यक काममा हिडडुल नगरौ !यसरि हामिले सचेत र सतर्क भयर हिड्यौ भने सधै भरि लकडाउनको मार बाट केहि भए पनि राहत अबश्य मिल्नेछ ! एक जिम्मेवार नागरिको पहिचान झल्किने गरि सहयोग र सत्कर्म गरौ !